Brazil oo kaalinta koowaad kaga soo baxday Group E, halka Switzerland ay xaqiijisay booska labaad – Gool FM
Brazil oo kaalinta koowaad kaga soo baxday Group E, halka Switzerland ay xaqiijisay booska labaad
Dajiye June 27, 2018
(Russia) 27 Juunyo 2018. Kulanka oo ahaa Mid aad u xiiso badan ayaa waxaa uu u dhaxeeyay xulalka Serbia iyo Brazil waxaanayna labada xul kusoo xirteen kulanlkooda saddexaad ee Group-ka E.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si cajiib ah ee ku dheehan weerar iyo weerar celis waxaana qeybta koowaad lagu kala baxay 1-0 uu ku hogaaminayay xulka qaranka Brazil.
Goolka xulka qaranka Brazil. ayaa yimid daqiiqadii 36-aad waxaana u dhaliyay xidiga khadka dhexe kooxda Barcelona Paulinho kaasoo hogaanka u dhiibay xulkiisa Samba kana dhigay ciyaarta 1-0. Kadib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Philippe Coutinho
Labada dhinaca ayaa helay fursado dhowr ah ay shabaqa ku gaaro kareen inta ciyaarta socotay, balse ugu dambeyn waxay labada dhinac ku kala nasteen 1-0 uu ku hogaaminayay wiilasha xulka qaranka Brazil.
Qeybta labaad markii la isku soo laabtay labada dhinac ayaa waxay dib u bilaaween inay sameeyaan qaab ciyareed aad loo jecleestay, waxayna sameeyeen kubado weerar iyo weerar celis ahaa
Daqiiqadii 68-aad ee qeybtii labaad ciyaarta xulka qaranka Brazil ayaa helay kalka kalsoonida waxaana u dhaliyay Thiago Silva oo ciyaarta ka dhigay 2-0. Waxaana goolkan ka caawiyay Neymar.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-0 uu xulka qaranka Brazil kaga soo baxay group-kan kaalinta koowaad, halka Switzerland ay ku soo baxday booska kaalita labaad.
Dhanka kale xullalka Switzerland iyo Costa Rica ayaa kulankoodii ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo labada xul ay qeybtii hore ku kala nasteen barbaro 1-0 uu hogaaanka ku qabtay xulka Switzerland.
Goolka xulka qaranka Switzerland ayaa yimid daqiiqadii daqiiqadii 31-aad waxaana goolka u saxiixay laacibkooda Blerim Dzemaili kaasoo ku hogaaminay xulkiisa in qeybta nasashada ay ku maraan iyagoo hogaaminaya ciyaarta.
Qeybta labaad ee ciyaarta xulka qaranka Costa Rica ayaa helay goolka barbaraha daqiiqadii 56-aad waxaana u dhaliyay Kendall Waston oo ciyaarta ka dhigay 1-1, kadib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Joel Campbell.
Laakiin dhamaadka ciyaarta daqiiqadii 89-aad ayay markale Switzerland hoganka u qabteen ciyaarta waxaana goolka u dhaliyay Josip Drmic oo ciyaarta ka dhigay 2-1, kadib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Denis Zakaria.
laakiin daqiiqadii 90-aad ayay markale Costa Rica heleen goolka barbaraha kadib markii uu islka dhaliyay goolhaayaha Yann Sommer ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barbaro 2-2.
Dhaawaca Marcelo oo war laga soo saaray (Waa sidee xaaladiisa)
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii Serbia vs Brazil?